यहाँ छ तपाईं कसरी प्रभावकारी मार्केटिंगको साथ जलाउनु हुँदैन Martech Zone
हामीले प्रभाव मार्केटिंगको पासोको बारेमा अघि लेखिसकेका छौं। एकको रूपमा समय-समयमा क्षतिपूर्ति पाएको एकको रूपमा प्रभाव, म मार्केटिंग सम्बन्धहरू कत्तिको प्रभाव सेटअपमा छन् भन्नेमा सचेत छु।
मुद्दामा, यस वर्षको सुरूमा मलाई आमन्त्रित गरियो ब्रिकयार्ड किनकि म स्थानीय हुँ प्रभाव सामाजिक मिडिया मा। त्यहाँ सामाजिक मिडिया बाट आमन्त्रित गरिएको मान्छे को एक समूह थिए - सबै को लागी एक लोकप्रिय प्रभाव स्कोरिंग ईन्जिन मा उच्च स्कोर संग इंडियानापोलिसमा। ट्र्याकले पार्कि passes पासहरू र सुट टिकटहरू प्रदान गर्‍यो र घटनासँगै बाहिर निस्कियो। म वास्तवमै गएन - मैले अन्तिम मिनेटमा एउटा संघर्ष गरेको थिएँ।
मेरो एक साथी गए र उनले ठट्टा गरे कि कसरी, एक विन्दुमा, एक प्रसिद्ध ड्राइभर तिनीहरू द्वारा हिंडे र कसैले पनि यसलाई महसुस गरेन ... तिनीहरूले सोशल मीडियामा फोटोहरू फ्याँक्नु अघि ऊ को हो भनेर उनीहरूले सोध्नु पर्छ। कस्तो बस्ट! प्रभाव अभियान सबै सिलिन्डरहरुमा हरायो (बुझ्नुभयो?) र मैले वास्तवमा ट्र्याकमा सम्पर्क गर्न खोजेको थिए जब मलाई बोलाइएको थियो उनीहरूले आफ्नो पैसा खर्च गरेनन्। कसैले पनि मलाई पछाडि बोलाएनन्। म एउटा कार्यक्रममा पनि थिएँ जहाँ मैले केहि समयको लागि अनुरोध गरे कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तिले ट्र्याक प्रचार गर्न मद्दत गरिरहेछन् ... उनले मलाई पनि ब्रश गरे।
त्यहाँ एक सफल को3विशिष्ट तत्वहरु छन् प्रभावकारी मार्केटिंग रणनीति र यस अभियानले ती सबै हरायो:
के प्रभावशाली खेलको दर्शक दर्शकहरु तपाइँ पुग्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ? ट्र्याक रेसिंगमा रुचि राख्ने १०० जना अनुयायी भएको व्यक्तिलाई निम्त्याउनु भन्दा अझ राम्रो हुने थियो जससँग k०k फलोअर छ जसको मलाई रेसिंगको बारेमा कुनै चिन्ता छैन यदि मैले रेसिंगको बारेमा कुरा गर्दिन भने।
त्यहाँ थियो कथा साझेदारी गर्न को लागी उनीहरूको श्रोताको साथ कि अनुनाद हुन्छ? देखाउँदै, नि: शुल्क खाना खाँदै, बियर पिउँदै, र नि: शुल्क ट्र्याकमा जान कुनै कथा होइन। ट्र्याकले पारिवारिक जडान, ईतिहास, ड्राइभरहरू, टेक्नोलोजी… बियर तस्बिरहरू बाहेक अरू केही कुरा गरेको भए यो घटना अभूतपूर्व हुने थियो।
त्यहाँ थियो प्रभाव मापन गर्न कार्य गर्न कल गर्नुहोस् अभियान को? ठीक छ, त्यसैले त्यहाँ एक दिन शेयर-अफ-भ्वाईसमा स्पाइक हुन सक्छ किनभने यी सबै सामाजिक प्रभावकर्ताहरूले ब्रिकयार्डको बारेमा कुरा गरेका थिए। हाहा! म पूरै ठट्टा गर्दैछु - त्यहाँ कुनै स्पाइक थिएन किनभने त्यहाँ पहिले नै सयौं हजारौं प्रशंसकहरू दौडको बारेमा कुरा गरिरहेका थिए! यी प्रभावकारीहरूले केहि पनि परिवर्तन गरेनन्।
यदि लक्ष्य व्यक्ति लाई ट्र्याकमा विशिष्ट फ्यानबाट बाहिर ल्याउने हो भने यसले सहयोग गरेन। मैले एउटा कथा सुन्न पाइन जुन बाध्यकारी थियो ...। वास्तवमा मैले मेरो साथीबाहिर कुनै कथा सुनेको थिइन जसले नि: शुल्क टिकट पाएकोमा हाँसे। कथाहरू जुन आवश्यक परेको थियो तिनीहरूसँग पigned्क्तिबद्ध हुनुपर्छ रणनीतिहरू जुन हाम्रो खरीदमा निर्णय लिन्छ.
त्यहाँ धेरै मानिसहरूलाई जिम्मेवार ठह .्याउन यति धेरै गर्न सकिन्थ्यो। ट्र्याकमा उनीहरूको अर्को सामाजिक सम्मेलन भएको पम्प्लेट हुन सक्छ, ट्र्याकको बारेमा व्यक्तिहरूसँग साझेदारी गर्न छुट कोड, सायद ट्वीटहरू, अपडेटहरू र फोटो अप्सहरूको सूची जुन उनीहरूसँग किन जानुपर्दछ भन्ने कथाहरूको बारेमा प्रयोगकर्ताहरूसँग संलग्न हुन समन्वय गरिएको थियो। ट्र्याकमा, के घटनाहरू अगाडि आउँदैछन् र कहाँ टिकट खरीद गर्ने।
यदि तपाईं भुक्तानी गर्न वा प्रभावकर्ताहरूलाई केही दिन लाग्नु भएको छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि यसले तपाईंको लागि कार्य गरिरहेको छ! म प्रभावकारी विपणनको बिलकुल विरोधी होइन, यो केवल केहि साइटमा प्रभावकारीहरू खोज्न र तिनीहरूलाई सबै निःशुल्क टिकट फ्याँक्न सजिलो छैन। यो यति धेरै राम्रो हुन सक्छ!
टैग: ईटयार्डइन्डियानापोलिस रेसवेप्रभावप्रभावकारी विपणनkloutदौड ट्र्याक